Ku Laabashada Wararka Dugsiga 2021 - Aagga Stillwater Dugsiyada Dadweynaha ISD 834
Ku soo dhowow sanad dugsiyeedka 2021-2022!
Waxaan sugeynaa in ardayda iyo shaqaalaha ay ku soo laabtaan sannad kale oo weyn oo waxbarasho ah! Qaybtan waxaa ku jira ilo waxtar leh si loo hubiyo in adiga iyo ilmahaagu diyaar u tihiin maalinta koowaad ee dugsiga.
Macluumaadka Badbaadada COVID-19
Waxaan sii wadi doonnaa inaan raacno dhammaan CDC iyo gobolka tilmaamaha la xiriira COVID-19 iyo talooyinka si aan ugu abuurno goobo waxbarasho oo ammaan ah oo caafimaad leh carruurta dayrtaan. Talooyinkan ku-dhaqanka ugu fiican waxay ka tarjumayaan xaaladda hadda jirta ee masiibada iyo sidoo kale ahmiyadda barashada qof ahaan waana la beddeli karaa.
guddiga si ay ugu codeeyaan shuruudda maaskaro -8 kahor kulanka 26-ka Agoosto (isbeddelka taariikhda xusuusta)
Ku noqo Kalandarka Dugsiga
Agoosto 30 2021
Maalinta Koowaad ee Dugsiga Fasalada 6 & 9
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maalinta Koowaad ee Dugsiyada Fasallada 6 & 9
Diyaar, Set, Tag Shirarka (Dugsiga Hoose)
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Diyaargarowga, Dejinta, Shirarka Tag (Dugsiga Hoose)
Ogast 31 2021
Maalinta Koowaad ee Dugsiyada Fasalada 7-8, 10-12
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maalinta Koowaad ee Dugsiyada Fasalada 7-8, 10-12
Sebt 2 2021
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan No School
Maalinta Koowaad ee Fasalada preK-5
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maalinta Koowaad ee Fasalada preK-5
Waxyaabaha Looga Baahan Yahay Ku-Laabashada Dugsiga
Guddigu wuxuu tixgeliyaa shuruudaha maaskaro preK-8
Guddiga dugsiga ayaa la filayaa inay u codeeyaan shuruudda qarinta ee preK ilaa fasalka 8 inta lagu jiro kulanka guddiga 26 -ka Ogosto (isbeddelka taariikhda qoraalka).
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Guddigu wuxuu tixgeliyaa shardiga maaskaro preK-8
Waxaan wajahaynaa yaraanta darawalnimada baska dayrta, taas oo laga yaabo inay keento dib -u -dhacyada baska. Macluumaadka jidka ee soo socda Agoosto 18.
Read More about Filo qaar ka mid ah caqabadaha baska dayrta
Cunto bilaash ah ayaa sii socota sannadka oo dhan!
Dhammaan ardayda degmadu waxay cuni doonaan BILAASH sannad dugsiyeedka oo dhan. Qoysaska ayaa weli lagu dhiirigelinayaa inay buuxiyaan arji lacag la'aan ah oo la dhimay. Waxay ka badan tahay qado bilaash ah!
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cuntada bilaashka ah ayaa sii socota sannadka oo dhan!
Ardaydu waa inay haystaan dukumiinti ku saabsan xaaladda tallaalkooda ee cudurrada qaarkood si ay u xaadiraan dugsiga, sida uu dhigayo sharciga gobolku.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Talaalada
Tilmaamaha cusub ee badbaadada COVID-19
Kafiiri tilmaamaha ugu dambeeyay ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota ee laxiriira hababka badbaadada ee COVID-19 deyrtaan.
Akhri wax badan oo ku saabsan tilmaamaha cusub ee badbaadada COVID-19
Ku keydso lacag safarrada dibadda, khidmadaha cayaaraha iyo wax ka badan
Qoyskaagu wuxuu u qalmi karaa lacag la'aan ama qiimo jaban ee khidmadaha isboortiga, kirada qalabka, dalabka kuleejka iyo ajuurada imtixaanka iyo waxyaabo kaloo badan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kaydso lacagta safarada dibadda, khidmadaha ciyaaraha iyo wax ka badan
Kaydi rasiidhada cashuur -dhaafka
Ma ogtahay in in badan oo ka mid ah agabka dugsiga ee aad u soo gadato ilmahaaga sannadkan ay yarayn karaan canshuuraha aad bixiso lagana yaabo inay kuu horseedaan lacag celin weyn sannadka dambe?
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kaydinta rasiidhada jebinta cashuurta
Isku qor fariinta qoraalka!
Is -qor si aad u hesho cusboonaysiinta muhiimka ah farriinta qoraalka
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Saxiix fariinta qoraalka!
Skyward ayaa baxay. PowerSchool ayaa ku jirta.
PowerSchool waxay badaleysaa Skyward oo ah barxadeena internetka ee loogu talagalay in lagu xareeyo macluumaadka ardayda.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Skyward wuu baxay. PowerSchool ayaa ku jirta
La halgama farsamada? Waan ku caawin karnaa! (ka furmay daaqad cusub/tab)
Dhibaato ma kaa haysataa isku xirka PowerSchool ama ma u baahan tahay taageero ilaha kale ee internetka? La xiriir Taageerada Farsamada Qoyska ee Tooska ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan La -dagaallanka tiknoolajiyadda? Waan ku caawin karnaa! (ka furmay daaqad cusub/tab)
Wali waxaa jira wakhti lagu tallaalayo
Ardayda Minnesota ee 12 iyo ka weyn ee qaata qaddarkooda ugu horreeya ee tallaalka COVID-19 ugu dambayn Ogosto 15 waxay dhalin karaan $ 100 kaarka hadiyadda Visa.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Weli waxaa jira wakhti lagu tallaalayo
Goorma La Joogaa Guriga (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Dareen xanuun. Guriga joog. Tani waxay gacan ka geysan doontaa faafinta cudurrada faafa, oo ay ku jiraan COVID-19, iyo inay carruurteena wax ku bartaan dugsiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Goorta La Joogayo Guriga (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Saacadaha Dugsiga 2021-2022
8:45 subaxnimo - 3:15 galabnimo
7:50 am - 2:20 pm
& Kala -guurka Buundada
Ku Xidhnaw oo Kala Soco Xogta
E-News iyo E-Flyers: Qoysaska ayaa si toos ah loogu qori doonaa e-news-ka dugsiga iyo degmada iyo nidaamka qaybinta e-flyer-ka Peachjar.
Fariin Qoraal: Isku qor adeegayaga Fariin Qoraalka oo lagu soo dhiibay SchoolMessenger. Waalidiintu waa inay doortaan inay helaan qoraallo waxaana laga yaabaa in heerka farriinta caadiga ah lagu dabaqo. U qor Y ilaa 67587.
Warbaahinta Bulshada: Nagala soco Facebook , Twitter iyo YouTube .
Ka hel macluumaadka aaladdaada gacanta
Ka soo dejiso barnaamijyadan App Store -kaaga: Google Play | Dukaanka App (Apple)